राहुल र स्मिता अन्तिम पटक एकैसाथ चल्यो रुवाबासी (भिडियो सहित) « Bagmati Online
तनहुका राहुल गुरुगं इन्डियन लाहुरे र सानी छोरीलाई छोडेर हिडेकी उनकी श्रीमतीको जिवनमा फेरी अर्को मोड आएको छ । उनी श्रीमानको घरवाट हराएको एक महिना पछि काठमाडौको होटलमा अर्का एक पुरुषसंग फेला परेकी थिइन् । अहिले उनी पछुतोको आँशु झारेकी छन् । उनले आफु ठूलो संकटवाट जोगिएको भनेकी छन् ।
आफ्नो सानी छोरीलाई विद्यालय छोड्न भन्दै हिडेकी थिइन् । उनी त्यस पछि घर फर्किइनन् । उनी उतैवाट हराइन् । तर अहिले केही समय पछि उनको श्रीमती स्मीता जनकपुरको नारायण यादवसंग काठमाडौको गौशाला स्थित एक होटलमा करिब एक महिना देखि बस्दै आएको पत्ता लागेको छ । ्
स्मीता हराएपछि उनको माइतीले आफ्नो छोरीलाई गायब बनाएको आरोप राहुलको परिवारलाई लगाएका थिए । स्मीताले आफुसंग भएको मोवाइल र सुन आफैले बेचेको बताएकी छन् । उनले आफ्नो इच्छाले नारायणको साथमा आएको भन्दै राहुलको परिवारसंग नडराउने पनि बताइदिइन् । काठमाडौको होटलमा स्मीता फेला परेपछि राहुलको परिवारले भिडियो कल मार्फत स्मीताको माइतीलाई त्यसबारे जानकारी दिएका छन् । तर स्मीताले भने आफ्नो दिदीहरुको सम्पर्कमा रहेको बताइन् । उनले एक दिन अघि आफ्नो दिदीलाई आफुले आफ्नो जिन्दगीको निर्णय गरेको भनेर जानकारी दिएको पनि बताइदिइन् ।
विदेश पठाइदिन्छु भन्दै एक लाख २५ हजार रुपैयाँ ठगी गर्ने एजेन्ट पक्राउ !
भारतीय चेली, नेपालकाे मन्त्री ! सुरुभयाे अंगीकृत नागरिकताकाे खेल !